May | 2007 | Layma's World
လွမ်းနေပါသည်…….M.I.T ( M.T.U)
Posted on May 29, 2007 by layma
Filed under: Link to the past |	Leaveacomment »
Posted on May 28, 2007 by layma
*source: ကိုပြူးနှင့်မပြုံး (ကာတွန်းဝိဇ္ဇာအလင်္ကာကျော်စွာဦးဘဂျမ်း)
“ယနေ့လူငယ်၊ နောင်ဝယ် လူကြီး” ၊ “The child is father of the man” လို့တင်စားခံထားကြရတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအားလုံးသာ ဒီလိုကာတွန်းလေးတွေနဲ့ကြီးပြင်းခွင့် ရခဲ့မယ်ဆိုရင်……………………………………………..
Filed under: Cartoons |	Leaveacomment »
Posted on May 25, 2007 by layma
လေးမတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အတုခိုးတဲ့နေရာမှာ သိပ်တော်တာ…..လေးမတောင်ခု သူများတွေကိုအတုခိုးပြီး blog ရေးနေပြီ …..။ ဒီနှစ်တွေမှာ Korea ကားတွေချည်းဘဲကြည့်နေရတော့ မြန်မာတွေ Korea ရေစီးကြောင်းထဲတော်တော်မျောပါကုန်ပြီ…..ဈေးဝယ်ရင်တောင် Korea-made ဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့ ကိုင်ပေါက် ခံနေရတယ်…..။ ကောင်မလေးတွေက Korea မင်းသမီးတွေလို ၀တ်ကြတယ်…..။ Hair style , make-up စတဲ့ ပြင်ဆင်ခြယ်သမှုအားလုံးဘဲ…..။ ကောင်လေးတွေလဲ Korea style ဘဲ…..။ ဆံပင်ကိုအရောင်ဆိုးပြီး စုတ်တိစုတ်ဖွားလေးတွေ ညှပ်ထားကြတယ်…..။ အရင်က ဆံပင်တိုတိုထောင်ထောင်လေးနဲ့ နာမည်ကြီး vocalist တယောက်တောင် Korea style ဆံပင်နဲ့ဖြစ်နေပြီ…..။ သူရဲ့ Liveshow တစ်ခုဆိုရင် Rain ရဲ့ Liveshow နဲ့တော်တော်ဆင်တယ်…..။
ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ အတုမယူကြသေးတာ တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်…..။ အဲဒါက…..“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ခဏခဏ ပြောတတ်တဲ့အကျင့်လေးပါ…..။ လေးမတို့့ မြန်မာတွေကယဉ်ကျေးကြပါတယ်….. ဒါပေမယ့်တချို့နေရာတွေမှာ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ပြောဖို့ ဝန်လေးနေကြတယ်…..။ စားသောက်ဆိုင်မှာ မှာထားတဲ့ဟင်းလာချတဲ့အခါမျိုး ၊ ဆိုင်တဆိုင်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုရပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဝယ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမျိုး ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ ဆံပင်ညှပ် ပြီးတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့…..။ မာနကြီးတာလား….ပိုက်ဆံပေးထားတာ ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်လို့ လား မသိဘူး…..။ Korea movie တွေထဲမှာ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….ရောင်းကောင်းပါစေ…” ဆိုတာလေးတွေ တွေ့ ရတာ သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာဘဲ…..။ လေးမတို့အတုယူကြရအောင်ပါ……။
မြန်မာတွေလို မယဉ်ကျေးဘူးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အနောက်တိုင်းသားတွေတောင် “Thank You” ကို ရေလဲ သုံးကြတယ်…..။ American ကားတကားမှာ ဇနီးက ခင်ပွန်းကို breakfast အတွက် coffee ဖျော်ပေးပြီးတော့ “here’s coffee” ပေါ့…အဲတော့ခင်ပွန်းလုပ်တဲ့သူက “thank u,honey..u r so kind” တဲ့…..။ လေးမတို့ဆီမှာ အိမ်ဦးနတ် ဘယ်နှစ်ယောက်ကများ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်ပြုတ်နေတဲ့ ဇနီးသည်ကို “thanks”လို့ဘယ်နှစ်ခါများ ပြောဘူးပါသလဲ….။ တစိမ်းတွေမှမဟုတ်ဘဲလို့ဆင်ခြေ မပေးပါနဲ့ …။ သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို သူလုပ်နေတာ ဘာအဆန်းလုပ်ပြီး ပြောရမှာလဲလို့တွေးထားကြတယ် မဟုတ်လား…..။ အဲဒီလောက်ကြီး နေရာတကာ လိုက်ပြောနေစရာမလိုပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာတော့ ပြောလိုက်ပါ…..“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ …..။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်…။
ကဲ……. အတုယူလိုက်ကြရအောင်…….။ ။
Filed under: That's what I wanna say |	2 Comments »
Posted on May 24, 2007 by layma
လေးမရဲ့ Blog လေးတော့ လုပ်ပြီးသွားပြီ ။
ဘာတွေ ရေးရမလဲ။ ဘာမှလဲ ရေးစရာမရှိဘူး ။
အများပညာရနိုင်မယ့် IT အသိပညာလဲ မရှိဘူး ။ နိုင်ငံရပ်ခြားက အတွေ့ အကြုံတွေ ရေးရအောင်လဲ မြန်မာပြည်ကလွဲရင် ဘယ်မှရောက်ဖူးခြင်းမရှိ ။ ၀တ္ထု၊ ဇာတ်လမ်းလေးတွေရေးရအောင်လဲဘယ်တုန်းကမှ မြန်မာစာဂုဏ်ထူးမရဖူးခဲ့တဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ဆိုတော့…….။
ကဗျာရော……??? ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ သစ်ရွက်လှုပ်တာတောင်ကဗျာရေးချင်တဲ့အချိ်န်ကပေါ့ ။ ခုတော့သစ်ရွက်လှုပ်တာ လောကမှာဘာကိုမှအစိုးမရတာ….သစ်ရွက်ကြွေတာဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးလို့ ပြောတာဆိုတာ နားလည်စပြုလာပြီဆိုတော့ ရေးစရာ အကြောင်းအရာတွေ ၊ စာသားတွေလဲရှားကုန်ပြီ…..။
ဒါဆို ဘာလို့ အပင်ပန်းခံပြီး blog လုပ်တာလဲလို့ ပြောကြမှာလား ။
ဟုတ်ကဲ့…..blog ဆိုတာ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးတအုပ်လို့နားလည်ထားလို့ ပါ ။
ဒိုင်ယာရီဆိုတော့ တွေးချင်တာတွေး ရေးချင်တာရေးလို့ ရတယ်လေ ။ စိတ်ရဲ့စေရာတွေကိုရေးရင်းနဲ့လေးမမှာလဲ ကိုယ်ပိုင် blog လေးတစ်ခုရှိတယ် ဆိုတဲ့ ပီတိအတွေးလေးနဲ့ …………………ပေါ့ ။
Filed under: Pieces |	3 Comments »